Umthandazo womsebenzi. ? Fumana, Fumana kwaye ubizwe
Ukuthandazela umsebenzi Singakwazi ukufumana izibonelelo ezininzi.
Imithandazo sisicwangciso sokomoya esisinceda ukuba sifumane isisombululo kwiingxaki apho singasoloko singazi ukuba senze ntoni okanye senze njani.
Kwesi sivakalisi sinokuzibuza ngokwethu, ukuze indawo yomsebenzi imnandi, cela abaphathi bethu okanye abaphantsi kunye nezinye izicelo kuxhomekeka kwiimeko ezahlukeneyo ezinokuthi ziphakame kuloo ndawo.
Into ebalulekileyo kukwazi ukuba kwimicimbi yezabasebenzi ikho imithandazo enokwenziwa ngokungqalileyo nangokuthe ngqo, uhlala ukhumbula ukuba umthandazo sisenzo sokholo ekufuneka senziwe ngokukholelwa kumandla anawo.
1 Ukuthandazela umsebenzi Ngaba unamandla?
1.1 Umthandazo wokufumana umsebenzi
1.2 Umthandazo wokusikelela umsebenzi
1.3 Umthandazo wokufumana umsebenzi kwiintsuku ezi-3
1.4 Ukucela umsebenzi ongxamisekileyo
1.5 Ukundibiza ngomsebenzi
2 Ngaba ndingatsho yonke imithandazo?
Ukuthandazela umsebenzi Ngaba unamandla?
Nawuphi na umthandazo unamandla. Ngenxa yoku, kwanele ukuba kuthandazwe ngokholo.
Ukuba unokholo oluninzi kwaye ukuba ucinga ukuba yonke into ihamba kakuhle, iya kusebenza.
Kholwa kuThixo Ikhula ngamandla ayo. Kuphela ke uya kunika yonke into ngokufanelekileyo.
Sukuchitha ixesha elingakumbi, qalisa ukuthandaza ngoku!
UYesu, Bawo waseZulwini kanaphakade:
Bawo, sikhokelo sam, amandla am, ndiyathetha kuwe uMsindisi wam ...
Unonyana wakho apha owonileyo, kodwa ngubani okuthandayo ...
Uyanconywa ngenxa yothando lwakho, ngokulunga kwakho okungapheliyo kunye nokhuseleko osinika lona, ​​Bawo.
Oko kuwe, yonke into inokwenzeka kunye nayo yonke into onokuyenza ngenxa yokuba ubabalo lwakho lukhulu kwaye awuzange undiyekele. Kwaye ngamaxesha okubandezeleka awuzange uyeke ukuyeka isandla sam.
Isonka, ububomi, uluthando nentuthuzelo. Ebumnyameni ukukhanya kwakho kundikhokelela. Ndiza kuwe, ndiguqe, Bawo wam endimthandayo, ndiyeza kwakhona ukuthandazela ukulunga kwakho okungapheliyo, ukukhusela kwakho.
Kuba ndiyazi ukuba esandleni sakho, andiyi koyika nto, kanjalo andiyi kuswela nto. Kuba wena, nkosi yam yokulunga, nceda abo baxinzelelweyo.
Ndicela ukhulule ixhala lam, ndicela ukuba isicelo sam siphendulwe. Yivise kobuhlungu bam kunye nokuxinana.
Bawo, Yesu wam othandekayo ovukile, jonga iimfuno zam undincede ukubaxhasa. Ndiyanicelela umsebenzi omtsha, Bawo.
Kuba ndiyazi ukuba iiplani zakho zigqibelele, kuba ndiziva ndihlaziyiwe. Ndiza kuwe ukuza kwenza isicelo sam. Ndidinga lo msebenzi ukuxhasa usapho lwam.
Ndiyazi ukuba wena ngokulunga kwakho okukhulu akuyi kundiyeka ukuba ndiwele ngenxa yesandla sakho andiyi koyika kwaye ndiziva ndikhululekile. Ndiyanibongoza, Bawo, ukuba ukulangazelela kwam kwamkelwe ngokukhawuleza.
Usikelelekile kwaye nguyise osezulwini. Ndiyazi ukuba uza kuvula iingcango kunye neefestile zethemba. Ndiyazi ukuba ngenceba yakho enkulu uya kundifumanela umsebenzi ofanelekileyo.
Ndincede, Nkosi yam, ukuba ube nomonde kwaye uvuzwe. Menze abe nomsebenzi ofanelekileyo, ophumelelayo kunye nozinzileyo. Ngenelela kwisicelo sam sokuzinza ngokwasezimalini.
Ndenzele uMboneleli kwaye usikelele usapho lwam, ukutya kwam.
Ndicela lo msebenzi okanye ndiqale ishishini lam.
(Cwaka ngesicelo sakho esikhethekileyo)
Ndincede Nkosi kum umthwalo wam ndiyakucela, Nkosi yam.
Ndiyakholelwa kuyo yonke into yakho, Thixo wam.
Usikelele ngonaphakade, Nkosi!
Lo mthandazo wokufumana umsebenzi unamandla amakhulu!
Ingxaki yabasebenzi isasazekile kwizixeko ezininzi zehlabathi. Nangona kunjalo kule meko ethile kukho isivakalisi esithile.
Ngale ndlela, eyona nto icetyiswayo kukubuza ngokuthe ngqo nangokunyaniseka esifuna ukukubona, ngowuphi umsebenzi esifuna ukuwufumana kwaye ucele ukukholelwa.
Akukho mthandazo wenziweyo usuka entliziyweni ongazalisi umphefumlo wethu ngamandla aqinisekileyo kwaye namandla afanayo yile nto siyakudlulisa naphi na apho sifika khona.
Umthandazo onamandla unokuwaphula imixokelelwane ekungenakwenzeka ukuba uyoyise ngamandla ethu omzimba.
Umthandazo wokusikelela umsebenzi
Ndiyabulela enkosi, kuba ndiyasebenza.
Ndisikelele umsebenzi wam kunye nabo ndisebenza nabo.
Siphe ubabalo lokudibana nawe ngomsebenzi wemihla ngemihla.
Sincede sibe ngabasebenzi abangakhathaliyo babanye. Sincede senze umsebenzi wethu ukuba ube ngumthandazo.
Sincede sifumanise emsebenzini indlela yokwakha umhlaba olungcono.
Mnumzana, njengokuphela komntu onokuphelisa ukunxanelwa kwethu ubulungisa, sinike ubabalo lokuzikhulula kubo bonke ubugwenxa, bathobeke.
Ndiyabulela enkosi, kuba ndiyasebenza. Ungavumeli usapho lwam luswele inkxaso kwaye kwikhaya ngalinye kusoloko kukho into eyimfuneko ukuze uphile ngesidima.
Imithandazo eyenzelwe injongo yokusikelela ubomi bethu okanye ubomi babo basingqongileyo ithande ukuba zezona zicelo zinyanisekileyo ezinokwenziwa.
Xa sicela abanye sibonisa ukuba sinentliziyo entle esisinikwe nguThixo.
Yiyo loo nto sithandaza ukusikelela umsebenzi Asingomthandazo wokunceda thina kodwa uthandazela aba intlalontle yabo bonke abo basebenza kunye nathi kwindawo yokusebenza.
Kulo mthandazo unokucela ezo meko apho indawo yokusebenza ilayishwe ngamandla amabi kunye ngcamango izinto ezimbi.
Umthandazo wokufumana umsebenzi kwiintsuku ezi-3
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, nkosi yam, uMelusi wam, uMsindisi wam, Thixo wam, ndiyakukhonza njengo Nyana kaBawo ongunaPhakade, ndiyakuthembela kwaye ndiyakudumisa ngobubele bakho nokulunga, ndiyakuhlonela kuba undinika ukhuseleko kunye nawe Andoyiki nto, ndiyakuthanda kuba undihlambe ngee grace kunye nezipho zasezulwini ngalo lonke ixesha ndibuya nosizi lwam phambi kwakho, qho ndicela uncedo lwakho.
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, Wena ukuqaqamba kokuKhanya okunguNaphakade wandise izandla zakho zokuxhasa kwakhona ngaphezulu kwam uze kundinceda kwingxaki yam; Wena ungumzalwana kunye nomhlobo wabasweleyo kwaye ungaze usiyeke wedwa ukuze singaphambuki, Wena usoloko usecaleni lethu undibabale undincede kwiingxaki zam nokusilela, ndixole uze undophule kwiingxaki zam, Njengomlamleli owahlukileyo phakathi koThixo nabantu, uzisa izibongozo zam phambi kwakhe ukuze azinyaswe.
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, jonga le mfuno inkulu endinayo ngoku: ekukhangelo lwam somsebenzi ndizifumana ndizimelele, nangona ndizama ukuba andikwazi ukuyifumana kwaye ndiyifuna ngokungxamisekileyo kuba iimfuno zam zigqibelele kwaye zilangazelela, kuba Ndicela undinike uncedo lwakho lothando.
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, uvula zonke iingcango endizifumana zivaliwe, ndincede ndikwazi ukuba nomsebenzi olungileyo okanye ishishini elindinika uzinzo kuqoqosho kwaye indinika amathuba okuphucula nokuqhubela phambili, umsebenzi oqinisekileyo okanye ophumelelayo okanye ishishini apho Ndingaba nokukhula kobungcali kunye nobuqu.
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, Wena ugcwalisa imiphefumlo kunye nemizimba ngokuzola, unciphise ukungakhululeki endiziva ngaphakathi kum, mandikhuphe kulo mzuzu umbi kwaye ungandivumeli ukuba ndingene nzulu nzulu.
Kule yure yokuphelelwa lithemba nokuhlwempuzeka ndikhokele kumanyathelo endiwenzayo, ndenze ukuba ndifumane izithembiso ezilungileyo zomsebenzi, ndivule zonke iingcango ndibeke abantu abathembekileyo ngendlela yam abanikezela ngenkxaso yabo; ndinike ubulumko bokubonisa ubuchule kunye nokunyamezela nokuqina kwam ukuze ndinganikezeli.
Ndincede ndifumane umsebenzi olungileyo apho ndingakwazi ukwenza imisebenzi yam ngempumelelo kwaye ndifumane imali efunekayo kakubi ekhayeni lam, ndithumele uYesu wam olungileyo iintsikelelo zakho ukuze ndikwazi ukufumana oko ndikudingayo:
(Thetha ngokholo olukhulu ukuba ufuna ukufumana ntoni)
Yesu, Yesu wam olungileyo, Yesu wam othandekayo, ndiyabulela ndisemazantsi endibabale ngazo zonke izibonelelo osinike zona nangayo ezayo endiqinisekile ukuba ngekhe ilahleke, ndingowakho wonke kwaye ndinqwenela ukuba ngonaphakade ezulwini , apho ndinethemba lokubulela ngokungazenzisiyo kwaye ndingaze ndihlukane nani kwakhona.
Makube njalo. Amen
Ngaba uwuthanda umthandazo wokufumana umsebenzi kwiintsuku ezi-3?
Ngamaxesha amaninzi sifumanisa ukuba kukho umsebenzi ofumanekayo kwenye indawo esifuna ukusebenza kuyo kodwa akunakwenzeka ukuba ukwazi ukungena kuloo msebenzi.
Kwezi meko akukho nto ilunge ngaphezu komthandazo kuba yeyeyona leta yethu intshayelelo.
Xa ungena kudliwanondlebe lomsebenzi Sinokucela uThixo ophakamileyo umdali wezulu nomhlaba ukuba asinike ubabalo lokwenza umbono wokuqala olungileyo.
Kwelinye icala kufuneka sisoloko sibuza ukuba ngamanye amaxesha le nto siyifunayo ayisiyiyo into efunwa yiNkosi kuthi kwaye ngalo mqondo kufuneka sikulumkele kakhulu ukwenza kuphela ukuthanda kukaThixo.
Masidlulele kwesinye isivakalisi somsebenzi.
Ukucela umsebenzi ongxamisekileyo
UThixo ngumqeshi omkhulu emhlabeni.
Ndiyathemba ukuba kuninzi kwakhe kwaye ukuba uza kundinika owona msebenzi mhle awuphumezileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Umsebenzi apho ndiya konwaba khona.
Ndiza kuchuma, kuba ndinamathuba amaninzi okunyuka. Umsebenzi apho imeko yomsebenzi ingummangaliso.
Umsebenzi apho abaphathi bam boyika uThixo kwaye babonelela ngendawo efudumeleyo nenobulungisa yabasebenzi babo.
Ngesi sizathu, ndiza kuhlala ixesha elide kuloo msebenzi kwaye ndiziva ndonwabile ukusebenza apho uThixo eneempahla ezininzi kum, ngokuhambelana nayo yonke into. el mundo.
Ngombulelo, ndiya kuhlala ndivuya, ndabelana nabo bonke uvuyo lweNkosi, ndifundisa ngokuzola nangokuthobeka nangomzekelo wam, unyamezelo, ukuthembeka, ukuzola, uxanduva nokupha imihla ngemihla ngovuyo olukhulu, ukuze le nto ndiyenzayo uthando, yeyokwenzela abantu abaninzi.
Amen, enkosi Bawo ukuba undivile kwaye yenziwe
Ukufika kwindawo apho bengakhange bafune abasebenzi kwaye nokufaka isicelo somsebenzi kungalinyathelo elifuna inqanaba eliphezulu lesibindi njengoko kukho ithuba elihle lokuba siyokwaliwa ngaphandle kokubonisa zonke izakhono zethu.
La Umthandazo wokucela umsebenzi Ukungxamiseka kunokusinceda siphumelele kuvavanyo lokuqala lokufaka isicelo somsebenzi ngokuzenzekelayo hayi ngenxa yokuba sibone intengiso.
Ngexesha lokucela umsebenzi, uncedo lokomoya luyacelwa ukuba wazi apho uya khona, kuba kaloku nguThixo owalathisa amanyathelo ethu ukusukela ngoku simka ekhaya de kube sibuyele kuwo.
Bawo osemazulwini othandekayo, eGameni likaYesu, ndikhangela ubulumko bakho kwaye ndithembele kuwe ukuba undikhokele ukuba ufune umsebenzi olungele mna.
Sele ndifuna ukuhamba phantsi kwenceba yakho nenyaniso kwaye ngaphandle kokuqubuda kwiminqweno yam kunye nokuqonda okungaphezulu.
Ndincede ndifumane umsebenzi olungileyo apho, ngezandla zam, akukho nto ilahlekileyo kum okanye nantoni na.
Andizoxhalaba okanye ndizixakekise nganto Bawo ngoba ndiluva uxolo lwakho lufika phezu kwentliziyo yam neyam engqondweni.
Ungumthombo wamanzi aphilayo, ndinentembelo kulungiselelo lwakho ondinike lona amandla ukumelana namahla ndenyuka obomi bam imihla ngemihla.
Ndiyabulela, Bawo, ngokubonelela ngemfuno yam yomsebenzi ngokobutyebi bakho kunye nozuko lweNkosi yethu.
Owu Thixo wam, ngamana amandla akho angaba nam namhlanje ukufumana umsebenzi. Ndikhokele kuloo msebenzi endiya kuwuthanda ndiwuxabise ngomphefumlo wam wonke.
Ndikhokele kwindawo enemoya yentlonipho nentsebenziswano, kwindawo ekhuselekileyo neyonwabileyo.
Ndincede ndifumane loo mizinga yengqondo neyokomoya kuloo msebenzi mitsha undibekele wona.Ndiyabulela enkosi ngokundimamela nangokundinceda namhlanje.
Ubomi abusoloko bulula, kodwa ndiza kuzama ukukhumbula ukuba usoloko undinceda ngamaxesha onke obomi bam.
Mayibongwe iNkosi, Malibongwe igama lakho elingcwele, Amen.
Okwalo mzuzu sele sishiyile amaxwebhu ethu kwinkampani, kuya kufuneka sibuyele ekhaya silinde ukuba loo mnxeba wenziwe ngexesha elifutshane kakhulu, kuba olona vavanyo lwethu lukhulu kukulinda ngaphandle kokuphelelwa lithemba.
Umonde ungundoqo kule nkqubo yokulinda.
Nangona kunjalo, akufuneki silinde ngonaphakade, bacela abaBini ukuba bahambise iziqwenga zethu ukuze ucingo oluqinisekileyo silulindile lufike ngokukhawuleza.
Ngaba ndingatsho yonke imithandazo?
Unokuthetha izivakalisi ezi-5 ngaphandle kwengxaki.
Into ebalulekileyo kukuba nokholo ngexesha lokuthandazela umsebenzi. Akukho okunye.